Iciko Lizishaya Isifuba ngomasipala weTheku – Sivubela intuthuko Newspaper
Iciko Lizishaya Isifuba ngomasipala weTheku
Ongumsunguli we Cikoza Mkhumbane Heritage Festival uMnuz Sakheleni Mthethwa
“Uxhaso engiluthola eminyangweni ehlukene yoMasipala weTheku ilona elwenze ukuba lomcimbi ube sezingeni okulona njengamanje,” lawa amazwi ka uMnuz Sakheleni Mthethwa ongumhleli womcimbi ogqugquzela amasiko iCokoza Mkhumbane Heritage Festival. Lomcimbi obanjalo ngenyaka ka September wasungulwa ngonyaka ka-2017 ngenhloso yokuqhakambisa amasiko kanye nomculo wesintu ikakhulukazi kubaculi abasafufusa.
Ngokusho kukaMthethwa owaziwa ngo Sakhi M, ngenkathi ewuqala lomcimbi waxhaswa i Area Based Management (ABM) yase Cato Manor, eMkhumbane okuyilapho lomcimbi ubanjelwa khona. “Iminyango engaphansi kuMasipala weTheku ibe nekhulu iqhaza elibambile ekuthuthukiseni lomcimbi njengoba usuqeda unyaka wesine wasungulwa. Kuleminyango ngibala, uArts and Living Culture, ABM, eThekwini Youth kanye neminye engisize ngezinto okubalwa amatende, ukudla, imali yokukhokhela abaculi, iziphuzo, izindlu zangasese ngisho nemali yokukhokhela abaphathi bohlelo,” kusho uMnuz Mthethwa.
Nakuba engakabi naso isiqiniseko sokuthi lomcimbi uzoqhubeka yini kulonyaka ngesimo sobhubhane lokhuvethe uthi umnyango waka Arts and Living Culture ubumuthembisile futhi ukuthi uzomxhasa ngakudingayo. “Kuyasiza ukuba nabaxhasi uma wenza umcimbi ngoba kwenza izinto zibelula. Bengifisa ukuba lobudlelwane esinabo naleminyango buqhubeke ngoba esikwenzayo sikwenzela umphakathi,” kusho uMnuz Mthethwa.
Exoxa kabanzi ngalomcimbi, uthi wawusungula ngenhloso yokugqugquzela ukuzigqqaja kwesizwe esimnyama ngamagugu aso kanjalo nangobusona. “Yingakho siba nabaculi abahlukene abakhombisa amakhono abo emculweni wesintu okubalwa owesicathamiya, umaskanda, indlamu kanye nomculo wokholo. Kubalulekile singabantu ukuthi singayikhohlwa imvelaphi yethu,” kuqhuba uMnuz Mthethwa.
Uthi njengoba lomcimbi ubanjelwa eMkhumbane nokuyindawo enomlando obalulekile lapha eThekwini naye ufisa ukwenza omunye umlando omuhle oyokhunjulwa nayizizukulwane.
UMnuz Mthethwa naye ongumculi wokholo abuye abe ngumsakazi esiteshini somphakathi uthi inyanga kaSeptember inyanga ebalulekile kakhulu njengoba isikhumbuza ngemvelaphi yethu. “Nakuba kungafanele ukuba sikhombise ukuzigqaja ngobuthina kulenyanga kuphela kodwa yona yenzelwe ukuba sonke njengama Africa sikhumbuzane futhi sifundisane ngokuyigugu kuthina. Kuningi esikubona kwenzeka ngalenyanga okubalwa noMkhosi woMhlanga nokuwumcimbi odume umhlaba wonke. Lena into yethu yingakho kumele siziqhenye ngayo. Mina nginguMzulu futhi ngiyaziqhenya ngobumina,” kusho uMnuz Mthethwa.
I- Kangaroo ibonga uMasipala weTheku
IMINDENI EWU 40 ISULWE IZINYEMBEZI